Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguGarry
I-Tallulah yindlu entle yaseQueenslander eselunxwemeni ebekwe kwindawo entle yoNxweme olukuMbindi woNxweme lweValla Beach kumbindi wendlela phakathi kweSydney neBrisbane. I-Tallulah ikhazimlisa umtsalane okhululekileyo kunye nolwamkelo- ilungele iholide yakho yosapho eleleyo. I-Tallulah yindlela elula ye-600m yokuhamba ngendledlana yehlathi ukuya eNorth Valla Beach ethandwa yinja. Chitha iintsuku zakho uqubha, ukusefa, ukuntywila emanzini, ukujonga ingingqi yasekhaya okanye uphumle nje kwibhedi yosuku okanye i-hammock ukuze uphumle kwaye uchache. Siyazi ukuba uya kumthanda uTallulah!
UTallulah ulala alithoba anamagumbi okulala amane kunye negumbi lokuhlambela ezimbini. Ikhitshi elikhanyayo nelibanzi elinesicwangciso esikhulu sokutyela esivulekileyo kunye negumbi lokuhlala lenza eli likhaya elifanelekileyo losapho. Ukuhonjiswa konxweme, imigangatho yamaplanga aqinileyo kunye neveranda entle engaphambili enedaybed igqibezela umfanekiso. Igadi ibiyelwe ngokupheleleyo ukuze kukhuseleke abantwana bakho kunye nezilwanyana zasekhaya. Kukho i-air conditioning kwindawo ephambili yokuhlala kwaye abalandeli abazimeleyo bafumaneka kumagumbi okulala ukuba bayafuneka. I-WiFi iyafumaneka.
INorth Valla Beach yeyona ndawo ifanelekileyo yokubaleka kwasekuseni, ukuhambahamba, ukukhwela ibhayisekile, ukuqubha okanye ukubukela nje idolphin pods zihamba elunxwemeni. Unxweme lwaseNorth Valla lunokufikelelwa ngeenyawo ukusuka eTallulah ngendlela yehlathi ngeJagun Nature Reserve ukuya elwandle "Humpty's". Ukuba ukufikelela kuyingxaki kumalungu osapho lwakho kukho iindawo ezahlukeneyo zokungena elunxwemeni. Ngexesha lokubukela iminenga, iJones Park yeyona ndawo ifanelekileyo kwipikiniki ngelixa ujonga i-humpbacks kwimfuduko yabo yonyaka.
Zimbini iicafe ezintle eValla Beach ezibonelela ikofu esemagqabini kunye nezidlo ezilula kodwa ezigqibeleleyo kunye nokutya okutyiwayo, kunye nokhetho lwezinto zegrosari. I-Coffs Harbour yimizuzu nje engama-30 ukuya emantla okanye uthathe uhambo oluya ngaphakathi elizweni ukuya kwidolophu yamagcisa edumileyo yaseBellingen kunye neendawo ezintle ezinje ngeLizwe Lesithembiso kwaye ungaze uGqibe. Amahlathi emvula aseGondwana adweliswe njengeLifa leHlabathi kunye neengxangxasi zaseDorrigo National Park zikumgama nje weyure. Ukuhamba nje ngemizuzu eli-10 kwaye useNambucca Heads kuzo zonke iimfuno zakho zokuthenga igrosari.
Indlu-Intle iTallulah Retreat ikhazimlisa umtsalane obalaseleyo waseOstreliya. Umoya wakhe okhululekileyo nowamkelekileyo ulungile kwiholide yakho yosapho eleleyo. Siyabuthanda ubomi obulula obuhamba ngaselwandle, ubuhlobo babantu kunye nobuhle bendalo esingqongileyo. Siyathemba ukuba uyakubiza uTallulah 'ekhaya', nokuba nje ngobusuku obumbalwa.
I-Tallulah Retreat likhaya lakho kude nekhaya!
Ukufikelela elunxwemeni kwezithuthi ezinemvume yokuqhuba elunxwemeni kusetyenziswa umkhondo wehlathi ongavalwanga wephepha ofumaneka kwindawo yokupaka iimoto eCockburn Street.
Zonke iilinen kunye neetawuli (hayi iitawuli zaselwandle) zinikezelwe. Kukho izixhobo zokujonga umsi kule ndawo.
Kukho umgaqo-nkqubo ongqongqo wokutshaya kule ndawo.
50" HDTV ene-I-Apple TV, I-Netflix
I-Valla Beach luluntu oluncinci olukude nesiphithiphithi sobomi besixeko kumbindi wonxweme olusemantla e-NSW nje emantla eNambucca Heads nakumazantsi eCoffs Harbour. Abantwana bethu bakhule bedlala kumaza, besenza iinqaba zesanti ezimangalisayo, ukufunda ukusefa, ukufunda ubutyebi baselwandle kwiindunduma, ukuhlola iqonga lamatye, ukubheqa e-Deep Creek, ukukhwela iibhayisekile, izithuthuthu, kunye neebhodi zokutyibiliza kwindawo ekhuselekileyo ebumelwaneni enosapho. Siyabuthanda ubomi obulula obuhamba ngaselwandle, ubuhlobo babantu kunye nobuhle bendalo esingqongileyo. Siyazi ukuba uya kuyithanda nawe.
I-North Valla Beach yi-5.2km ubude besanti emhlophe ecocekileyo ukusuka kwi-Wenonah Head emantla ukuya kwi-Valla Head emazantsi. INorth Valla Beach yeyona ndawo ifanelekileyo yokubaleka kwakusasa, ukuhambahamba, ukukhwela ibhayisekile, ukuqubha okanye ukubukela nje idolphin pods zihamba elunxwemeni.
Ngexesha lokubukela iminenga, iJones Park yeyona ndawo ifanelekileyo kwipikiniki ngelixa ujonga i-humpbacks kwimfuduko yabo yonyaka.
I-North Valla Beach inokufikelelwa ngeenyawo (okanye i-pushbike) ukusuka e-Tallulah ngendlela yehlathi nge-Jagun Nature Reserve ukuya kwi-"Humpty's" ukufikelela elunxwemeni. Ukuba ukufikelela kuyingxaki kumalungu osapho lwakho kukho iindawo ezahlukeneyo zokungena elunxwemeni. Indawo yokupaka iyafumaneka ekupheleni kweSitalato iCockburn. Ukufikelela elunxwemeni kwezithuthi ezinemvume yokuqhuba elunxwemeni kusetyenziswa umkhondo wehlathi ongavalwanga wephepha ofumaneka kwindawo yokupaka iimoto eCockburn Street.
I-South Valla Beach ifikeleleka nge-Valla Beach Road kwaye inendawo yokupaka iimoto, izindlu zangasese zoluntu kunye neendawo zepikiniki. Lulwandle olujonge emazantsi-mpuma kunye nomnyango we-Deep Creek kumazantsi esiphelo. I-South Valla Beach igadiwe ngexesha leeholide zeKrisimesi.
I-Deep Creek lagoon 'I-Creek' yindawo yokuqubha edumileyo ilungele iintsapho. Ifikeleleka ngemoto (okanye ngeenyawo) ngendlela engavalwanga edlula iCafé yaseBeachhouse kunye neenkundla zentenetya eThompson Street.
Ukuloba kuhle eValla Beach. Kukho ukuloba amatye kwi-headlands, ukuloba kwi-creek kwi-Deep Creek kunye nokuloba elwandle, kunye nolwandle olufikeleleka ngezithuthi ze-4WD (kunye neemvume) kwi-Cockburn Street yokungena eNyakatho yeValla. Iphepha-mvume lokuqhuba elwandle liyafuneka.
Zimbini iicafe ezintle eValla Beach ezibonelela ikofu esemagqabini kunye nezidlo ezilula kodwa ezigqibeleleyo kunye nokutya okutyiwayo, kunye nokhetho lwezinto zegrosari: ICafé yaseBeachhouse kunye neCafé eNourish kunye neGrocer. Kukwakho nethaveni ebonelela ngotywala kwaye ibonelela ngezolonwabo ngqo kunye nemali yokukhwela kwi-pub.
I-Valla Beach inembali etyebileyo yemveli eneendawo ezininzi zokubaluleka kwenkcubeko kunye nokubaluleka kuBantu baseGumbaynggirr. INunguu Mirral ezukileyo (indawo ekhethekileyo yekhangaru yegolide) (iNduli yasePickett) yintaba onokuyibona kumntla weTallulah phezu kophahla lwethu. I-Nunguu Mirral ibambe ukubaluleka okukhethekileyo ngokomoya nangokwenkcubeko kubantu bokuqala beli lizwe.
Elona ziko likhulu lengingqi, iCoffs Harbour, yimizuzu nje engama-30 kumntla weValla Beach. I-Coffs Harbour inemizi-mveliso yebhanana ekhulayo kunye ne-blueberry. Ummandla obanzi waziwa ngokuba yiBananacoast.
IBig Banana yindawo enomtsalane kubakhenkethi kunye nepaki yokuzonwabisa eneRacer 82m isilayidi samanzi, ithegi yelaser, igalufa encinci, i-ice skating, ithiyetha ebonelela ngamava okufundisa, kunye nokukhwela i-toboggan kunye nepaki yamanzi.
I-Coffs Harbour inesikhululo seenqwelomoya esibonelela ngeenkonzo eSydney, eMelbourne naseBrisbane. Isikhululo seenqwelomoya simalunga. Imizuzu engama-30 ukusuka eTallulah.
Qiniseka ukuba uthatha uhambo oluya ngaphakathi elizweni ukuya kwidolophu yamagcisa edumileyo yaseBellingen kunye neendawo ezikungqongileyo ezintle ezinje ngeLizwe Lesithembiso kwaye ungaze uGqibe. Amahlathi emvula aseGondwana adweliswe njengeLifa leHlabathi kunye neengxangxasi zaseDorrigo National Park kukumgama nje weyure.
Iilali ezingaselwandle zase-Urunga naseSawtell emantla eValla Beach zibonelela ngeelwandle ezintle ngakumbi, iikhefi ezinkulu, iiboutiques, imveliso yasekhaya kunye nokuhamba ngaselunxwemeni.
Ndingaqhagamshelwa nge-imeyile okanye ngefowuni. Ukuba asikho ebumelwaneni ngexesha lotyelelo lwakho sinabafowunelwa basekuhlaleni abanokukunceda ukuba kukho naziphi na iingxaki.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-9162